Guddi Qoraxeedka Bifacial
MY SOLAR Guddi Qorax Qoraal ah
Guddi Cadceedda Half-Cell
Aan Heer Sare ahayn
MY qorraxda M3 Mono Solar PV P ...
MY qorraxda M2 Mono Solar PV P ...
MUUQAALADA MUHIIMKA AH 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar cell solar wuxuu qaataa tiknoolajiyad cusub si loo hagaajiyo waxtarka qaybaha, wuxuu bixiyaa muuqaal qurxoon oo qurxoon, kana dhigaya mid ku habboon rakibida saqafka. Waxtarka sare ee beddelka moduleka sare (illaa 19.98%) wuxuu ka faa'iideystaa farsamada Passivated Emmiter Rear Contact (PERC). Waxqabadka PID Resistance Wanaagsan Anti-PID wuxuu damaanad qaadayaa hoos u dhigida awoodda xaddidan ee wax soo saarka ballaaran. Waxqabadka hooseeya ee muraayadda horumarsan iyo qoraalka dusha sare ee unugga ...
MUUQAALADA MUHIIMKA AH 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar cell solar wuxuu qaataa tiknoolajiyad cusub si loo hagaajiyo waxtarka qaybaha, wuxuu bixiyaa muuqaal qurxoon oo qurxoon, kana dhigaya mid ku habboon rakibida saqafka. Waxtarka sare ee beddelka moduleka sare (illaa 20.38%) ayaa ka faa'iideysanaya qaab dhismeedka unugyada nuska ah (dabeecad iska caabin hooseysa). Waxqabadka PID Resistance Wanaagsan Anti-PID wuxuu damaanad qaadayaa hoos u dhigida awoodda xaddidan ee wax soo saarka ballaaran. Waxqabadka iftiinka hooseeya ee muraayadda sare iyo dusha sare ee gacanta ...
MUUQAALADAHA MUHIIMKA AH 6/9/12 Busbar Solar Cell 6/9/12 unugga qorraxda qoraxda wuxuu qaataa tiknoolajiyad cusub si loo hagaajiyo waxtarka qaybaha, wuxuu bixiyaa muuqaal qurxoon oo qurxoon, kana dhigaya mid ku habboon rakibidda saqafka. Waxtarka sare ee beddelka moduleka sare (illaa 20.38%) ayaa ka faa'iideysanaya qaab dhismeedka unugyada nuska ah (dabeecad iska caabin hooseysa). Waxqabadka PID Resistance Wanaagsan Anti-PID wuxuu damaanad qaadayaa hoos u dhigida awoodda xaddidan ee wax soo saarka ballaaran. Waxqabadka hooseeya ee muraayadda horumarsan iyo dusha sare ee gacanta ...
MUUQAALADA MUHIIMKA AH 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar cell solar wuxuu qaataa tiknoolajiyad cusub si loo hagaajiyo waxtarka qaybaha, wuxuu bixiyaa muuqaal qurxoon oo qurxoon, kana dhigaya mid ku habboon rakibida saqafka. Waxtarka sare ee beddelka moduleka sare (illaa 20.45%) wuxuu ka faa'iideystaa nus dhismeedka unug (dabeecad iska caabin hooseysa). Waxqabadka PID Resistance Wanaagsan Anti-PID wuxuu damaanad qaadayaa hoos u dhigida awoodda xaddidan ee wax soo saarka ballaaran. Waxqabadka hooseeya ee muraayadda horumarsan iyo dusha sare ee gacanta ...
MUUQAALADA MUHIIMKA AH 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar cell solar wuxuu qaataa tiknoolajiyad cusub si loo hagaajiyo waxtarka qaybaha, wuxuu bixiyaa muuqaal qurxoon oo qurxoon, kana dhigaya mid ku habboon rakibida saqafka. Waxtarka sare ee beddelka moduleka sare (illaa 19.84%) wuxuu ka faa'iideystaa teknolojiyadda Passivated Emmiter Rear Contact (PERC). Waxqabadka PID Resistance Wanaagsan Anti-PID wuxuu damaanad qaadayaa hoos u dhigida awoodda xaddidan ee wax soo saarka ballaaran. PID Resistance Wanaagsan Anti-PID waxqabadka li ...
MUUQAALADA MUHIIMKA AH 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar cell solar wuxuu qaataa tiknoolajiyad cusub si loo hagaajiyo waxtarka qaybaha, wuxuu bixiyaa muuqaal qurxoon oo qurxoon, kana dhigaya mid ku habboon rakibida saqafka. Waxtarka sare ee beddelidda moduleka sare (illaa 20.3%) ayaa ka faa'iideysanaya teknolojiyadda Passivated Emmiter Rear Contact (PERC). Waxqabadka PID Resistance Wanaagsan Anti-PID wuxuu damaanad qaadayaa hoos u dhigida awoodda xaddidan ee wax soo saarka ballaaran. Waxqabadka iftiinka hooseeya ee muraayadda horumarsan iyo qoraalka dusha sare ee gacanta ...
MUUQAALADA MUHIIMKA AH 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar cell solar wuxuu qaataa tiknoolajiyad cusub si loo hagaajiyo waxtarka qaybaha, wuxuu bixiyaa muuqaal qurxoon oo qurxoon, kana dhigaya mid ku habboon rakibida saqafka. Waxtarka sare ee beddelka moduleka sare (illaa 19.8%) wuxuu ka faa'iideystaa teknolojiyadda Passivated Emmiter Rear Contact (PERC). Waxqabadka PID Resistance Wanaagsan Anti-PID wuxuu damaanad qaadayaa hoos u dhigida awoodda xaddidan ee wax soo saarka ballaaran. Waxqabadka iftiinka hooseeya ee muraayadda horumarsan iyo qoraalka dusha sare ee gacanta ...
MUUQAALADA MUHIIMKA AH 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar cell solar wuxuu qaataa tiknoolajiyad cusub si loo hagaajiyo waxtarka qaybaha, wuxuu bixiyaa muuqaal qurxoon oo qurxoon, kana dhigaya mid ku habboon rakibida saqafka. Waxtarka sare ee beddelka moduleka sare (illaa 20.08%) wuxuu ka faa'iideystaa teknolojiyadda Passivated Emmiter Rear Contact (PERC). Waxqabadka PID Resistance Wanaagsan Anti-PID wuxuu damaanad qaadayaa hoos u dhigida awoodda xaddidan ee wax soo saarka ballaaran. Waxqabadka hooseeya ee muraayadda horumarsan iyo qoraalka dusha sare ee unugga ...
MUUQAALADA MUHIIMKA AH 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar cell solar wuxuu qaataa tiknoolajiyad cusub si loo hagaajiyo waxtarka qaybaha, wuxuu bixiyaa muuqaal qurxoon oo qurxoon, kana dhigaya mid ku habboon rakibida saqafka. Waxtarka sare ee beddelka moduleka sare (illaa 20.17%) ayaa ka faa'iideysanaya teknolojiyadda Passivated Emmiter Rear Contact (PERC). Waxqabadka PID Resistance Wanaagsan Anti-PID wuxuu damaanad qaadayaa hoos u dhigida awoodda xaddidan ee wax soo saarka ballaaran. Waxqabadka iftiinka hooseeya ee muraayadda sare iyo muuqaalka dusha sare ...
MUUQAALADA MUHIIMKA AH 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar cell solar wuxuu qaataa tiknoolajiyad cusub si loo hagaajiyo waxtarka qaybaha, wuxuu bixiyaa muuqaal qurxoon oo qurxoon, kana dhigaya mid ku habboon rakibida saqafka. Waxtarka sare ee beddelka moduleka sare (illaa 17.1%) wuxuu ka faa'iideystaa teknolojiyadda Passivated Emmiter Rear Contact (PERC). Waxqabadka PID Resistance Wanaagsan Anti-PID wuxuu damaanad qaadayaa hoos u dhigida awoodda xaddidan ee wax soo saarka ballaaran. Waxqabadka iftiinka hooseeya ee muraayadda horumarsan iyo qoraalka dusha sare ee gacanta ...
MY SOLAR P3 Poly Solar PV Panel 160w 165watt 170wp 175 Watt 180 w Qalabka Solar Pv Module
MUUQAALADA MUHIIMKA AH 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar cell solar wuxuu qaataa tiknoolajiyad cusub si loo hagaajiyo waxtarka qaybaha, wuxuu bixiyaa muuqaal qurxoon oo qurxoon, kana dhigaya mid ku habboon rakibida saqafka. Waxtarka sare ee beddelka moduleka sare (illaa 17.65%) wuxuu ka faa'iideystaa teknolojiyadda Passivated Emmiter Rear Contact (PERC). Waxqabadka PID Resistance Wanaagsan Anti-PID wuxuu damaanad qaadayaa hoos u dhigida awoodda xaddidan ee wax soo saarka ballaaran. Waxqabadka hooseeya ee muraayadda horumarsan iyo qoraalka dusha sare ee unugga ...
MUUQAALADA MUHIIMKA AH 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar cell solar wuxuu qaataa tiknoolajiyad cusub si loo hagaajiyo waxtarka qaybaha, wuxuu bixiyaa muuqaal qurxoon oo qurxoon, kana dhigaya mid ku habboon rakibida saqafka. Waxtarka sare ee beddelka moduleka sare (illaa 17.5%) wuxuu ka faa'iideystaa teknolojiyadda Passivated Emmiter Rear Contact (PERC). Waxqabadka PID Resistance Wanaagsan Anti-PID wuxuu damaanad qaadayaa hoos u dhigida awoodda xaddidan ee wax soo saarka ballaaran. Waxqabadka iftiinka hooseeya ee muraayadda horumarsan iyo qoraalka dusha sare ee gacanta ...
No18, Yanxing Road Yanqiao Huishan Horumarinta Dhaqaalaha Degmada wuxi, Shiinaha